Warka - Najaasta Alwaaxa xabagta oo aan lahayn Ciddiyo ama Boolal
Ciridaynta ayaa qayb muhiim ah ka ah mashaariic badan oo alwaax ku saleysan. Laakiin go'aaminta xabagta ugufiican alwaaxda hawshaada gaarka ah’t had iyo jeer way fududahay. Halkan’s waxaad u baahan tahay inaad ogaato si aad u go'aamiso xabagta qoryaha ee sida ugu fiican ugu shaqeyn doonta mashruucaaga.
Polyvinyl acetate (PVA) xabagta ayaa ah nooca ugu badan ee xabagta looxa. Noocaan waxaa ku jira xabagta caadiga ah ee cad iyo jaalle, ama waxa badanaa loo yaqaan“nijaar’s xabagta.” Iit waxaa loo isticmaali karaa qaar badan – laakiin ma wada aha – mashaariicda.
Qarsoon xabagta waxaa laga sameeyaa wax soo saarka xoolaha. Waxay u imaan kartaa dareere ahaan ama sida granules, jajab, ama go'yaal u baahan in lagu milmo biyo. Waxay ubaahantahay in la kululeeyo laguna rido burush, waana isku xirtaa markay qabowdo.
Epoxy caadi ahaan waxay ku timaaddaa laba qaybood oo kala duwan: hardener iyo cusbi. Qaybaha waa la isku qasan yahay si loo abuuro isku xir kiimikaad ah, oo markuu adkaado, biyuhu diidaan oo buuxiya meelaha banaan. Epoxies Qaar ka mid ah waa gaabis in la bogsiiyo, laakiin iyagu waa qaar ka mid ah xabagta ugu adag ee la heli karo. Haddii aad raadineysid epoxy in’s fududahay in la dalbado oo si fiican ula shaqeeya qoryaha, iskuday Loctite Epoxy Quick Set ama mid ka mid ah Loctite’s epoxies badan oo codsi kasta ah.
Guluubyada Polyurethane waa nooc ka mid ah xabagta qoyaanka kiciya ee xumbaysta maadama ay ku qallajiso xabag aad u adkeysi badan.
Inta badan mashaariicda alwaaxda ku saleysan, Loctite PL Wood Lumber, Paneling & Trim Adhesive waa xulasho adag.
Fiiri fiidiyowgaan oo wax badan ka baro isticmaalka Loctite PL Premium Dhismaha Koolada dhammaan howlahaaga qoryaha ku saleysan:
Polyvinyl acetate (PVA) xabagta waa xabagta la isku qurxiyo iyo nooca ugu badan ee xabagta qoryaha. Waa midab la’aan iyo ur la’aan. Koolada PVA waxay sifiican u dejisaa meelaha leh hawo wanaagsan waxayna si dhakhso leh ugu qallajiso heerkulka qolka. Dhammaan xabagta PVA ma ahan kuwo biyuhu xireen, markaa iska hubi badeecadaada’tilmaamaha s.
Haddii aad si taxaddar leh u sii wadato, xulo guluubka saxda ah, oo aad raacdo hannaanka qallajinta saxda ah, qoryaha oo aad si wax ku ool ah u noqoto mid dhaqso ah Raac tillaabooyinkan fudud ee loo adeegsanayo xabagta PVA iyo xabagta kale.
1. Ku dheji xabagta labada dusha sare ee qoryaha si aad uhesho. U adeegso maro si aad u tirtirto wixii daadanaya ama qulqulaya isla markiiba.
2. Ku fidi xabagta alwaaxda jaakad khafiif ah oo isdaba joog ah adoo isticmaalaya burush ama balaastik fidiya.
3.Uxurka isla riix. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad bedesho dusha sare iyo gadaal wax yar si loo hubiyo jaakad xitaa iyo in la sii daayo hawo kasta oo sababi karta daldaloollo.
4.U isticmaal qalabka 'G-clamp' si aad uhesho qaybaha.
5.Iska daa jajabyada la isku dhejiyay ha fadhiisan khalkhalka waqtiga lagu taliyay ee lagu talinayo ee lagu siiyay tilmaamaha sheyga.
6.Sand ka ilaali wixii xabag ah oo xad dhaaf ah oo la qalajiyey.